तेज दिमाग भएको सन्तान चाहानुहुन्छ?गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी खाना समावेश गर्नुहोस्! |
तेज दिमाग भएको सन्तान चाहानुहुन्छ?गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी खाना समावेश गर्नुहोस्!
September 15, 2021 adminLeaveaComment on तेज दिमाग भएको सन्तान चाहानुहुन्छ?गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी खाना समावेश गर्नुहोस्!
काठमाडौँ । गर्भावस्थामा नै बच्चाको दिमागी विकास शुरु हुन्छ । यस्तोमा शिशु कत्तिको बुद्धिमान् हुन्छ भन्ने कुरा आमाको खानेकुरामा धेरै हदसम्म निर्भर गर्छ । यस्तोमा तेज दिमाग भएको बच्चाको लागि गर्भवती महिलाले आफ्नो खानामा यी कुराहरु समावेश गर्नु जरुरी हुन्छ:
अण्डा: अण्डामा कोलिन नामको तत्व हुन्छ, जुन दिमागको विकासको लागि जरुरी हुन्छ । यसबाट स्मरणशक्ति पनि बढ्नका लागि सहयोग पुग्छ । साथै अण्डामा आइरन र प्रोटिन पनि हुन्छ । यो पनि दिमागी विकासको लागि निकै जरुरी हुन्छ । यो अण्डाको पँहेलो भागमा पाइन्छ । त्यसैले अण्डाको सबै भाग खानु जरुरी हुन्छ ।
पालुङ्गो: गर्भावस्थामा खानामा पालुङ्गो निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा रहेको फोलिक अम्ल डीएनए र कोषको संरचनाको विकासको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । पालुङ्गोमा प्रोटिन, फाइबर, भिटामिन र अरु धेरै किसिमको प्रोटिन हुन्छ, जुसले दिमागको विकासको लागि सहयोग गर्छ । यद्यपि पालुङ्गोलाई निकै राम्रोसँग पकाउनु जरुरी हुन्छ ।
दाल: दालमा पनि भरिपूर्ण मात्रामा प्रोटिन हुन्छ। गर्भावस्थामा दालमा घिउ हालेर खाने सल्लाह दिइने गरिन्छ। गर्भावस्थामा दाल खानु निकै जरुरी हुन्छ । दाल आइरनको पनि राम्रो स्रोत हो।
एभोगाडो: मानिसको दिमाग ६० प्रतिशत बोसोले बनेको हुन्छ । यसका लागि फ्याटको जरुरी हुन्छ । जुन, एभोगाडोमा भरपूर मात्रामा हुन्छ । यसमा मानोअनसेचुरेटेड फ्याट पाइन्छ । यसबाट दिमागको विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।
फर्सीको बिऊ: फर्सीको बियाँ पनि गर्भावस्थामा खानु निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा जिंक पाइन्छ, जुन बच्चाको दिमागी विकासकोलागि अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । यसलाई सलादको रुपमा पनि खान सकिन्छ।
बदाम: गर्भावस्थामा बदाम खानु पनि बच्चाको दिमागी विकासको लागि निकै जरुरी हुन्छ। यसमा प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन बी र फोलेट पाइन्छ। यसमा भिटामिन ई पनि हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदै।देशभर चर्चाको विषय बन्यो यो खबर।
सोच्नै नसक्ने गरी घ:ट्यो खाने तेलको मू”ल्य
संक्रमणमुक्त भएपछी भुलेर पनि नखानुहोस् यस्ता खानेकुरा।हुन्छ असाध्यै हानिकारक
नया कोरोना भाइरसका यस्ता खतरनाक लक्षणहरू देखिन थाले,कतै तपाईलाई यस्तो भएको त छैन?
केही कुरा एक्छीन मै बिर्सिने र बेला बेला मा टाउको दुख्ने गर्छ भने दिमागको यस्तो रोग हुनसक्छ।बेलैमा यस्ता लक्षण चिनेर जचाई हाल्नुहोस्,ढिला होला